By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuvuselelwa ngo-Okthobha 13, 2020.
Yintoni iBacterial Vaginosis (Gardnerella Vaginitis)?
I-bacterial vaginosis sesona sizathu sixhaphakileyo sevumba lobufazi elingaqhelekanga kunye nokukhutshwa. Kubangelwa lutshintsho kuhlobo lweebhaktiriya ezifumaneka kwilungu lobufazi. Ngokwesiqhelo, iibacteria zezona zikhulu ILactobacillus usapho luhlala ngokungenabungozi kwilungu lobufazi kwaye luvelise imichiza egcina ubufazi bune-asidi kancinci. Kwi-bacterial vaginosis, ILactobacillus Iibhaktheriya zitshintshwa ezinye iintlobo zebhaktheriya eziqhelekileyo ezikhoyo kwiindawo ezincinci kwisini.
Igama lesiqhelo leTylenol
Oososayensi abasiqondi ncam isizathu solu tshintsho. Izinto ezinobungozi ezibonakala ngathi zonyusa amathuba okuba ibacteria vaginosis ibandakanye imbali yamaqabane amaninzi ezesondo, ubudlelwane bezesondo kunye neqabane elitsha, ukutshaya icuba, ukufakwa kwilungu lobufazi kunye nokusetyenziswa kwesixhobo sokuthintela inzalo sangaphakathi (IUD). Nangona uninzi lwezi zinto zinomngcipheko zinxulumene nokwabelana ngesondo, abasetyhini abangazange babelane ngesondo kwilungu lobufazi banokuphuhlisa i-bacterial vaginosis.
I-bacterial vaginosis ihlala yenzeka ngexesha lokukhulelwa. Inokubangela ukubeleka ngaphambi kwexesha kunye nokuhanjiswa, ukuqhekeka kwangaphambi kwexesha kweembumba kunye nosulelo lwasemva kwesibeleko. Kungenxa yesi sizathu le nto abasetyhini abakhulelweyo abanembali yokusebenza ngaphambi kwexesha okanye ezinye iingxaki ezinokuthi zijongwe yi-bacterial vaginosis nangona bengenazo iimpawu.
Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 zabasetyhini abanesifo se-bacterial vaginosis abanazo iimpawu. Kwabanye, kubangela ivumba elibi 'lentlanzi' lobufazi kunye nokukhutshwa kwilungu lobufazi elityheli okanye elimhlophe. Kubafazi abathile, ezi zimpawu ziyakhathaza xa usabelana ngesondo okanye emva komtshato. Ukukhutshwa okubonwe kwi-bacterial vaginosis kuthanda ukuba mncinci kune 'cheesy,' ukukhutshwa okutyebileyo okubonwa sisifo se-vaginal (Candida). I-bacterial vaginosis ihlala ingabangeli ukucaphuka okukhulu kwintlungu okanye iintlungu ngexesha lokwabelana ngesondo. Ukuba unale mpawu, ugqirha wakho uya kujonga ezinye izizathu ezinokubangela.
Ugqirha wakho uya kukucela ukuba uchaze ivumba lobufazi kunye nokukhutshwa. Uya kukubuza malunga nembali yakho yezonyango, kubandakanya:
Umhla wexesha lokugqibela lokuya esikhathini
Inani lamaqabane owabelana nawo ngesondo onawo
Nokuba ubukhe wanezifo zangaphantsi okanye zentsholongwane ngaphambili
Nokuba unazo naziphi na izifo ezosulela ngokwabelana ngesondo okanye izifo zesisu
Indlela yokucwangcisa oyisebenzisayo
Imbali yakho yokukhulelwa
Imikhwa yococeko lomntu, enje nge-douching kunye nokusebenzisa kwakho i-deodorants yabasetyhini
Nokuba unxibe iimpahla zangaphantsi ezifanelekileyo
Nokuba usebenzisa iitampon
Ugqirha wakho unokucela ukuba unazo naziphi na ezinye izifo, ezinjengesifo seswekile, okanye ukuba usebenzise i-antibiotics kutshanje.
Ugqirha wakho unokuchonga i-bacterial vaginosis esekwe kwiziphumo zovavanyo lwe-gynecological kunye novavanyo lwelabhoratri yelwelo lakho lobufazi. Akukho luvavanyo lufezekileyo, kodwa ukuba uneendlela ezintathu kwezi zilandelayo, kunokwenzeka kakhulu ukuba une-bacterial vaginosis:
Imhlophe, ibhityile, yokwaleka kwiindonga zakho zangasese ngexesha lovavanyo lwe-pelvic
Uvavanyo lwe-pH lokukhutshwa kwilungu lobufazi olubonisa i-asidi esezantsi (pH enkulu kune-4.5)
Ivumba leentlanzi xa isampulu yokukhutshwa kwilungu lobufazi idityaniswe nethontsi le potassium ihydroxide kwisilayidi seglasi ('uvavanyo lwentambo')
Iiseli ezincedayo (iiseli zolusu lobufazi ezigutyungelwe ziibhaktheriya) ezibonakalayo kuvavanyo oluncinci lolwelo lobufazi
Ugqirha wakho unokuyalela ezinye iimvavanyo zaselebhu ukujonga ezinye izizathu zokukhutshwa kwilungu lobufazi.
Oogqirha abaqinisekanga ukuba kutheni ukukhula kwe-bacterial vaginosis kukhula. Ngenxa yokuba yenzeka ngokuxhaphakileyo kubantu ababa neentlobano zesini, ibacteria vaginosis ithathwa njengenye ukuba isasazeka ngesondo. Nangona kunjalo, i-bacterial vaginosis ikwenzeka nakubantu abangazibandakanyi ngokwesondo okanye abebekade bebuhlobo obude kunye nomntu omnye.
Kwamanye amabhinqa, i-bacterial vaginosis iyaqhubeka nokubuyela emva konyango. Izazinzulu aziqondi ukuba kutheni le nto isenzeka. Ngamanye amaxesha, ukunyanga iqabane lamadoda abelana ngesondo okanye ukusebenzisa iikhondom rhoqo kunokunceda ukuthintela oku, kodwa olu ngenelelo alusoloko lunceda.
Ukuba ne-bacterial vaginosis kungenza kube lula kuwe ukuba wosulelwe yi-HIV ukuba iqabane lakho owabelana nalo ngesondo line-HIV. Ukuba sele unayo i-HIV, ke i-bacterial vaginosis inokunyusa ithuba lokuba uyosasaza i-HIV kwiqabane lakho owabelana nalo ngesondo.
Kubafazi abaninzi, i-bacterial vaginosis yingxaki nje, kwaye injongo yonyango kukhulula iimpawu. Oogqirha bahlala bephatha i-bacterial vaginosis nge imithombo ( Iiflegi okanye iMetroGel-Vaginal) okanye clindamycin (UCleocin). Inokuthathwa ngomlomo okanye ifakwe njengekhrimu yelungu lobufazi okanye ijeli. Nangona kunjalo, iZiko laseMelika lokuLawula nokuThintela izifo (i-CDC) licebisa ukuba bonke abasetyhini abakhulelweyo abaneempawu mabanyangwe ngamayeza amayeza omlomo kuba amayeza akhuselekile kwaye asebenza ngcono kunokhrim okanye iigel. Izifundo zibonisa ukuba unyango lweentsuku ezisixhenxe nge-metronidazole yomlomo okanye unyango lweentsuku ezintlanu ngejel lobufazi lwe-metronidazole lusebenza ngokulinganayo kwabasetyhini abangakhulelwanga. I-Clindamycin ukhilimu wesini ungaphantsi kancinci kunokuba luhlobo lwe-metronidazole.
Bonke abantu basetyhini abaneempawu ze-bacterial vaginosis kufuneka baphathwe. Abanye abantu basetyhini kufuneka bahlolwe isifo se-bacterial vaginosis nokuba abanazimpawu. Abafazi abakhulelweyo abasemngciphekweni omkhulu wokubeleka ngaphambi kwexesha kunye nokuhanjiswa kufuneka kuvavanywe kwi-bacterial vaginosis kwaye kuthathelwe ingqalelo kunyango ukuba kufunyenwe. Abanye oogqirha bakwacebisa ukuba abasetyhini abaphantsi kweenkqubo ezithile zesibeleko bavavanyelwe i-bacterial vaginosis, kwaye baphathwe nokuba iimpawu azikho. Kungenxa yokuba i-bacterial vaginosis inxulunyaniswa nokuphuhliswa kwesifo sokudumba kwamathambo kunye nolunye usulelo emva kwe-endometrial biopsy, isisu esenziwe ngotyando, isibeleko, ukufakwa kwesixhobo sangaphakathi, icandelo laseKesareya kunye nonyango lwesibeleko.
Oogqirha abacebisi unyango lwesiqhelo kumaqabane esini sabasetyhini abanesifo se-bacterial vaginosis.
Biza ugqirha wakho nanini na xa ubona naliphi na ivumba elingaqhelekanga lobufazi okanye ukukhupha, ngakumbi ukuba ukhulelwe.
Imbonakalo intle kakhulu. I-bacterial vaginosis inokubuya, kodwa ukuphinda unyango luhlala luphumelela.
Umthamo we-tylenol weentsana ngokobunzima
Inethiwekhi yeNgcaciso yeSizwe yeNgcaciso yeNgcaciso (NPIN)
Imowudi yekhamera ye-galaxy s7
indlela yokujongana neziphumo ebezingalindelekanga ze-augmentin
umthamo we-oxycodone ukuze uphakame
nini ukuthatha i-metamucil
Imiphumo emibi ye-lithium carbonate